QeerrooOromoo- Kun dhimma mormii Lagannaa Gabaa fi Mana Ooluu – Kichuu
HomeAfaan OromooTVQeerrooOromoo- Kun dhimma mormii Lagannaa Gabaa fi Mana Ooluu
QeerrooOromoo– Kun dhimma mormii Lagannaa Gabaa fi Mana Ooluu Ilaachisee Ibsa Qeerroo irraa kennamee dha.
“Mormiin lagannaa gabaa fi mana ooluu guutummaa Oromiyaa keessatti akka raawwatamuuf qeerroo Oromootiin waamame Hagayya 23, 2017 irraa kaasee hojii irra oolaa akka jiru beekamaadha. Duulli waamame kun amma guyyaa 3ffaa isaa xumuratee jira.
Duulli amma guyyaa 3ffaa qabatee jiru kun kaayyoowwan madaalamuu danda’an 3 qabatee ka’e.
Tokkoffaan, sochiin mormii uummata Oromoo humnaan ukkaamfamuu akka hindandeenyee fi kaayyoon qabsoo mirga abbaa biyyummaa uummatichi yeroo dheeraaf dhugoomsuuf qabsaa’aa har’a ga’e hanga galma ga’utti akka hindhaabanne ergaa ifaa erguu.
Lammaffaan, mootummaan guddina diinagee argamsiisuudhaan fudhatamummaa barbaadaa ture irratti duuluudhaan haala jireenya guyyaa guyyaa uummata Oromoo baay’ee osoo hinmiidhin akka hindhugoomne gochuu.
Sadaffaan, uummatni Oromoo tokkummaadhaan wallin ka’ee qabsaa’uu akka danda’u agarsiisuudhaan tokkummaa saba Oromoo fi bu’uura sabboontummaa Oromoo mirkaneessuu. Arfaffaan, qabsoon biyyoolessaa Oromoo bifa mormii irraa gara qabsoo xumura gabrummaa sadarkaa isa dhumaatti ce’uu isaa agarsiisuu.
Haaluma kanaan, diina keenya mootummaa Wayyaneef ibsuu kan barbaannu mormiin gabaa lagannaa fi mana ooluu marsaa kanaa milkiin xumuramus qabsoon uummata Oromoo ammas itti fufa. Nuti qabsaa’onni dhaloota ammaa kun ergaa keenya dabarfachuu fi injifannoo argachuu keenyatti amannus hanga kaayyoon qabsoo biyyoolessaa Oromoo galma ga’utti akka hinboqonne ibsuu feena. Hooggantootaa fi qabsaa’ota keenya kan akka Prof. Mararaa Guddinaa, Obbo Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo kumaataman lakkaayaman mana hidhatti dararuu, uummata duratti salphisuu fi gidirsuun waan Wayyaaneen gootu marti tasumaa fudhatama kan hinqabne ta’uusaa ibsuu feena. Akkasumas, yaaliin lafa muranii fudhachuudhaan Oromiyaa diiguuf godhamaa jiru gonkumaa fudhatama hinqabu. Kana malees, gibira humnaa olii irratti fe’uudhaan hojii daldalaa Oromiyaa keessaa laamshessuu fi daldaltoota Oromiyaa balleessuuf taasifamu matumaa akka hinfudhanne ibsuu barbaanna
Injifannoon kan Uummata Oromooti!”
Via : Dhábasá Wakjira Gemelal